LODGGY - Travel Blog
June 11, 2021 kyaw kyaw	Hotel Promotions, Myanmar, Ngwe Saung
ငွေဆောင်မှာ မိုးတွင်းဖွင့်တဲ့ ဟိုတယ်တွေရယ်၊ မိုးရာသီ ပရိုမိုးရှင်း အခန်းဈေးနှုန်းတွေရယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… 🌴Grand Ngwe Saung Resort 📅 (May – 30 Sept 2021)🔸Superior (Garden View) – 51,000 MMK🔸Deluxe (Garden View) – 59,500 MMK🔸2nd Sea View Bungalow – 70,000 MMK🔸1st Sea View Bungalow – 105,000 MMK 🌴Ria Resort 📅 (1 – 30 June 2021)💦☔️⛈1 NIGHT 1 FREE FOR JUNE,2021 ⛈ 💦☔️🔸Building Type …
Read the full post →“မိုးရာသီအတွက် ငွေဆောင်ဟိုတယ်များ”
LeaveaComment on မိုးရာသီအတွက် ငွေဆောင်ဟိုတယ်များ
အံ့ဩစရာဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ယနေ့တိုင်အောင် ခမ်းနားဆဲ ဝက်မစွတ်ကျောင်းဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဝက်မစွတ်ကျောင်းကြီး​၏ အလှူဒါယကာတို့မှာ ဦးထင်ပေါ်နှင့် ဒေါ်ဒေါ်အိုတို့ဖြစ်ကြပြီး ထိုကျောင်းကြီးကို 1918ခုနှစ် August လမှာ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး 1921 ခုနှစ် January မှာ ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ဝက်မစွတ်ဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းမှာတော့ ဝက်မင်းသည် မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရာမှ ဝက်မင်းဝမ်းဗိုက်ရေစွတ်သွားသည်ကို အကြောင်းပြု၍ “ဝမ်းမစွတ်” ၊ “ဝက်မစွတ်” ဟုခေါ်တွင်ကြကြောင်း ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကျောင်းတော်ကြီးတွေ သီတင်းသုံးနေကြနေကြသော ကျောင်းထိုင်ဘုန်းဘုန်းများလည်းရှိနေပါတယ်။ကျောင်းကြီးက နှစ်ထပ်ကျောင်းဖြစ်ပြီး အထဲမှာ ကြောင်လိမ်လှေကားတွေ၊ သရက်ကင်းလှေကားတွေ၊ စတိုခန်းတွေ၊ ကနုတ်လက်ရာအလှအပများနှင့် ဘုရားခန်းတွေ၊ စာတိုက်တွေနှင့် ရှေးခေတ်လက်ရာအမြောက်အမြားနှင့် အလှဆင်ထားပါတယ်။ နှစ်ကာလကြာမြင့်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုဒဏ်၊ အချို့သောဘေးတွေကြောင့် ပျက်စီးမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဒေသခံတွေနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းလိုသူပညာရှင်များပူးပေါင်းပြီး ကိုလိုနီခေတ် ဗီသုကာလက်ရာတွေနှင့် ရှေးဟောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းကြီး ဝက်မစွတ်ကျောင်းအား …
Read the full post →“နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)တိုင်အောင် ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ အသက်ဝင်နေဆဲ ဝက်မစွတ်ကျောင်း~”
LeaveaComment on နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)တိုင်အောင် ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ အသက်ဝင်နေဆဲ ဝက်မစွတ်ကျောင်း~
အခုလိုအချိန်မှာ စိတ်သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အေးအေးလူလူ နေနိုင်ဖို့က ခက်တယ်နော်.. လူတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်သက်သာနေတယ်ပြောပြော Covid နဲ့ Lockdown တွေနဲ့ အခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ပဲ အဲဒီ့စိတ်သက်သာတယ်ဆိုတာက အပ်ချည်တစ်မျှင်စာပဲဆိုတာသိကြမှာပါ။ (ကိုယ်တိုင်လဲ သိနေတယ်လေ) Facebook ကနေ Memories လေးတွေပဲတက်လာတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းထဲက ပုံအဟောင်းလေးတွေကြည့်ရင်း ခရီးသွားပုံတွေတွေ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားချင်စိတ်လေးတွေ ပေါ်လာမှာပါ့… (ကိုယ်တွေဆိုသွားချင်တာ ဆယ်ပိုင်းလောက်ကိုသေလို့…) ခုလော‌လောဆယ် အဆင်ပြေတာဆိုရင် Staycation လုပ်လို့တော့ ရတယ်လေ။ Staycation ဆိုတာက ကိုယ့် အနီးတစ်ဝိုက်က Hotel/Resort တစ်ခုခုမှာ တစ်ညလောက်ဖြစ်ဖြစ် သွားအနားယူတာပေါ့. ကိုယ်နေနေတဲ့ မြို့မှာပဲ သွားတည်းရမယ်? နေဦးလေ ဘာကြောင့်လဲ ရှင်းပြမယ်လေ…. 1. Staycation ဆိုတာက နေရာတွေလျှောက်လည်ဖို့မဟုတ်… ခရီးထွက်တဲ့အခါကျ ဟိုလဲသွားမယ်၊ ဒီနေရာလဲ ရောက်ချင်နဲ့ …
Read the full post →“ဘာလို့ အခုအချိန် Staycation သွားသင့်လဲ?”
LeaveaComment on ဘာလို့ အခုအချိန် Staycation သွားသင့်လဲ?
October 2, 2020 Eyint Kyi Pyar Zaw	Guides, Myanmar
များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ငပလီကမ်းခြေကို ခရီးထွက်ကြပြီဆို သံတွဲကို ဝင်မလည်တာ၊ သံတွဲကို မရောက်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ သံတွဲမှာ လည်စရာမရှိဘူး၊ သံတွဲမှာ ပျော်စရာ၊လေ့လာစရာတွေမရှိဘူးလို့ ထင်ကြတာများပါတယ်။ တကယ်လို့များ ခရီးတွေပြန်ထွက်ရလို့ ငပလီကမ်းခြေကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆို သံတွဲမှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ Lodggy.com မှ ခရီးသွားရင်း လေ့လာရ ပျော်ရတာကို နှစ်သက်ကြတဲ့ ခရီးသွား ချစ်သူများအတွက် မြန်မာပြည်အဖိုးတန်များမှတစ်နေရာ သို့မဟုတ် သံတွဲမြို့မှ လည်စရာများကို ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံများနှင့်တကွ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သမိုင်းဝင် ဆံတော်၊နံတော်၊အံတော် စေတီတော် Things to do in Thandwe ဆိုတဲ့ Topic နဲ့အတူ သံတွဲမြို့ကို လည်တော့မယ် ဆို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကျော်သွားလို့မရတာကတော့ ဒွါရာဝတီ-သံတွဲမြို့ရဲ့ သမိုင်းဂုဏ်ဆောင် ဆံတော်၊နံတော်၊အံတော် စေတီတော်တွေပါပဲ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ …
Read the full post →“Things to do in Thandwe သို့မဟုတ် သံတွဲသို့သွားလည်ခြင်း အနုပညာ”
guide, ThandweLeaveaComment on Things to do in Thandwe သို့မဟုတ် သံတွဲသို့သွားလည်ခြင်း အနုပညာ
October 1, 2020 kyaw kyaw	Hotel Promotions, Myanmar
ခရီးတွေပြန်ထွက်လို့ရရင် ဒီနေရာမျိုးလေးတွေမှာတည်းမယ်။သီးသန့်လေးနဲ့ လှပတယ်.. အေးချမ်းတယ်..ဒီလိုနေရာလေးတွေမှာ ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူ အချိန်တွေကုန်ဆုံးခွင့်ရသူတွေအတွက်တော့..?ရင်ထဲ လိပ်ပြာအကောင်တစ်သန်းလောက် ထပျံနေသလိုနေမှာပါ..? 1.Agga Pyinoolwin?အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Tiny House အိမ်ပုံစံလေးတွေကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ပထမဆုံး Tiny House လေးပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရောင်စုံအိမ်သေးသေးလေးတွေထဲမှာမှ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဧည့်ခန်းတွေကို ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အိမ်ပုံစံလေးတွေလည်း အမျိုးစုံပါပဲ။ အိမ်လေးတွေနဲ့ကော၊ အိမ်အထဲမှာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှပါတယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးပေါ်က ခုံလှလှလေးတွေမှာထိုင်ပြီး အေးချမ်းလှပတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ အလှတရားတွေနောက်ကို စီးမျောနိုင်မှာပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၂ ယောက်ခန်းကို ၃၅၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ကနေစရှိပါတယ်။?လိပ်စာ – လမ်းသာယာလမ်း သစ္စာလမ်းသွယ်၊ ဂန္ဓမာမြိုင်ပန်းခြံနှင့် မြို့ပတ်လမ်း (ကန်တော်ကြီးအဝိုင်း) အနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။ 2.TeaStory – Pyinoolwin?ပြင်ဦးလွင် အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်အနီး လက်ဖက်ခြံလေးထဲ Tent …
Read the full post →“အေးချမ်းလှပတဲ့ တည်းခိုစရာ နေရာများ”
hotel, pyin oo lwinLeaveaComment on အေးချမ်းလှပတဲ့ တည်းခိုစရာ နေရာများ
Knowledge, MonywaLeaveaComment on ဘာနည်းပညာအကူအညီမှမပါပဲ ကျောက်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့သာထွင်းထုပုံဖော်ထားတဲ့ ”ရွှေဘတောင်”
September 23, 2020 kyaw kyaw	Myanmar, Myeik island
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်စွန်း ကျွန်းပေါင်း ၈၀၀ ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြိတ်ကျွန်းစုက ဖြူလွှလွှသဲသောင်ပြင်ရှိတဲ့ကျွန်းတွေ၊ စိမ်းပြာရောင် ကြည်လင်သန့်ရှင်းနေတဲ့ ရေပြာပြာတွေ၊ ရေပေါ်ရေအောက် သတ္တဝါတွေ၊ သန္တာ ကျောက်တန်း နဲ့ လှပတဲ့ကမ်းခြေတွေ ပြည့်နှုက်နေတဲ့ ကျွန်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ငခင်ညိုကြီးကျွန်းဆိုတာ မြိတ်ကျွန်းစုများရဲ့ အနောက်ဘက်အကျဆုံး ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကော့သောင်းမြို့နဲ့ ရေမိုင်အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့ ကျွန်းတစ်ခုပါ။ ကော့သောင်းမြို့နဲ့ ရေမိုင် (၄၈) မိုင်ကွာဝေးပြီး ကော့သောင်း လှေဆိပ်မှ ၂ နာရီခန့် လှေစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးဆန်းလှပနေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ကျောက်တုံးကျောက်တောင်ကြီးတွေ၊ လှပသောကျောက်တုံးများနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကျွန်းတစ်ခုမို့ Boulder Island လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ မြိတ်ကျွန်းစုထဲကဆိုပေမယ့် ကော့သောင်းကနေ သွားရင်ပိုနီးပါတယ်။ ကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာ boulder bay ရဲ့ကမ်းခြေအပြင် တခြား ရေကူးလို့ရတဲ့ ကမ်းခြေပုံစံ အသေး ၃ ခုလောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ Boulder …
Read the full post →“ကြီးမားတဲ့ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်အလှတရားတွေနဲ့ Boulder Island (မြိတ်ကျွန်းစု)”
LeaveaComment on ကြီးမားတဲ့ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်အလှတရားတွေနဲ့ Boulder Island (မြိတ်ကျွန်းစု)